Windows Media Player bụ inbuilt music ọkpụkpọ site na Windows arụ ọrụ usoro. Ị nwere ike ọ bụghị naanị egwu audio / video faịlụ site na ya ma nwekwara ike ịgbakwunye ọtụtụ ndị ọhụrụ na faịlụ ka ya n'ọbá akwụkwọ. Ndị a faịlụ nwere ike ibudata site na internet kwa. Otú ọ dị ma ọ bụrụ na ị chọrọ ige ntị music online, e nwere ọtụtụ weebụsaịtị na ị ga-a owuwu. A bụ ndepụta nke n'elu 5 weebụsaịtị nke ga-ekwe ka ị na-ege ntị music online enweghị akwụ ụgwọ otu penny:
Mog bụ a ihe karịrị nde mmadụ 15 songs si nta ọ bụla niche. Ọ ga-abụ na hip iwuli elu English tracks ma ọ bụ ndị ọhụrụ groovy Bollywood music, Mog nwere ihe nile na ya ụlọ ahịa!
1: Wide nso nke song ndepụta ịhọrọ site na.
2: Songs na bụla niche na free ohere.
Otu nke kasị mma na nke kasị mmasị online redio, ị nwere ike ma na-arịọ ha na-egwu gị song ma ọ bụ ịkpọgharịa site na ha nnukwu nso nke online songs.
1: Enye gị na-arịọ gị song na redio.
2:-enye gị ohere ịkpọgharịa ngwa ngwa n'ime a dịgasị iche iche nke songs.
8Tracks.com bụ ihe ịtụnanya website nke ugbu a-enye gị ohere na-ege ntị songs dị ka gị ọnọdụ.
1: A kpamkpam categorized website na-enyere song search dị ka gị ọnọdụ.
2: Otu mfe interface anya n'ihi na ọkacha mmasị gị music.
Ọ bụrụ na ị chọrọ a zuru ezu song n'ọbá akwụkwọ maka onwe gị, mgbe ahụ, ị ​​ga-gaa na nke a website. A idiocha website na-akparaghị ókè ọtụtụ FM na nkiri songs ga-maa adọta gị.
1: Unlimited ọnụ ọgụgụ nke songs niile ngalaba.
2: The zuru ezu song ndepụta bụ ndokwa alphabetically nke pụtara na-achọ a song bụ mfe.
Slacker bụ a ukwuu na-akpali website nke na-enye ohere ya ọrụ na-ege ntị nakwa dị ka ibudata music tracks. The website bụ a n'ụlọ tọn songs gụnyere oge ochie nakwa dị ka oge a ịke songs. Ya mere nkechi elu na-amalite na sọọfụ maka ọkacha mmasị gị egwu.
1: Ọrụ nwere ike ige ntị nakwa dị ka ibudata songs.
2: Slacker nwere ụfọdụ n'ime kasị ochie songs na ya n'ọbá akwụkwọ nke nwere ike ibudata mfe.
Chọrọ ibudata ọhụrụ music tracks gị Windows Media Player? E nwere ọtụtụ ụzọ na nke i nwere ike ime otú ahụ ugbu a ụbọchị. Otú ọ dị kasị adaba na mfe ụzọ ibudata music ka Windows Media Player bụ site TunesGo software site Wondershare TunesGo Enyele a ọnụ ọgụgụ nke atụmatụ ya ọrụ nke na-agụnye:
1. ogbe nbudata na faịlụ Ọkpụkpọ conversions.
2. TunesGo akwado a ọnụ ọgụgụ nke video weebụsaịtị si ebe ị nwere ike ibudata elu definition videos ngwa ngwa.
3. TunesGo awade owuwu iji tọghata videos n'ime ihe ọ bụla chọrọ format; ya mere, unu nwere ike ibudata audios / vidiyo na ọ bụla usoro na tọghata ya mgbe e mesịrị.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ibudata music tracks site Wondershare TunesGo software, mgbe ahụ, na-eso nzọụkwụ n'okpuru:
Nzọụkwụ 1 Wụnye TunesGo software
The TunesGo software site Wondershare bụ kpam kpam free nke na-eri na nwere ike ibudata site na ịpị a njikọ: http://www.wondershare.com/tunesgo/. Ozugbo i ebudatara a software, ị nwere ike wụnye ya ngwa ngwa na-enwe ya uru.
Nzọụkwụ 2 Download na-akparaghị ókè music na YouTube videos
Ozugbo ị ibudatara na arụnyere na TunesGo software site Wondershare, ị nwere ike-amalite nbudata na ị mmasị music na ọdịyo na video usoro.
Nzọụkwụ 3 Import ebudatara music ka mgbasa ozi ọkpụkpọ
Mgbe nbudata chọrọ ọdịyo na video site TunesGo, ị nwere ike ugbu a mbubata ha gị Windows media ọkpụkpọ. The faịlụ ebudatara ama-aghọ akụkụ nke TunesGo n'ọbá akwụkwọ ma i nwere ike mbubata ha gị Windows mgbasa ozi ọkpụkpọ ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ iOS / android ngwaọrụ.
Play Xbox egwuregwu na Windows 10 Computer
> Resource> Windows> Olee otú ibudata music ka Windows Media Player?